true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 18 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
18.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Isimo sokuvukela umbuso sichazwa njengokukhaphela ngemuva kwokwethemba. (Ukukhaphela ukwenza ngamabomu ukwenza ngendlela ephula isithembiso noma isivumelwano ngemuva kokwethenjwa ukukwenza.)
Umuntu Usesimweni Sombuso Wokuhlubuka lapho ephikisana nemisebenzi kanye nezinhloso abethenjiwe ngazo.
Kuzotholakala ukuthi umuntu oyingxenye yeqembu (umndeni wakhe, abangani, abantu asebenza nabo noma noma yiliphi iqembu ayingxenye yalo) bese eqeda ukwethembana kwabo uzophazamisa noma aqede ingxenye ethile yalelo qembu.
Ngokungazi ukuthi uyi-_______ (igama lesikhundla), ukuvukela umbuso.
Imiphumela yalokhu ingatholakala emlandweni. Ukwehluleka ukuba yilokho umuntu anakho ngokomsebenzi noma igama lesikhundla kuzoholela ekukhashelweni kweqembu.
Cishe konke ukukhathazeka eqenjini kuqhamuka kuleli qiniso elilodwa:
Umuntu oseqenjini othi, esamukele isikhundla, angazi ukuthi uyileso sikhundla Usekuvukeleni iqembu.
Isibonelo, umshayeli webhasi ophuma usuku lonke futhi angafiki emsebenzini uvikela umbuso. Unabantu, abancane nabadala, abazungeze idolobha abalinde yena ukuthi azobalanda. Ekugcineni, umnikazi wenkampani ushayela ibhasi ngokwakhe bese ephatha abagibeli abathukuthele. Wayethembe umshayeli webhasi ukuthi enze umsebenzi wakhe futhi umshayeli webhasi wakwephula lokho kuthembana.
IFomula Yesimo Sokuvukela Umbuso yile:
Thola ukuthi ukhona.